Ilay zanaka lahy | Fiangonan'Andriamanitra an'izao tontolo izao Suisse - Fiangonan'Andriamanitra andriamanitra Switzerland
Andriamanitra, ny Zanaka, dia olona faharoa ao amin'ny Andriamanitra, noforonin'ny Ray hatrizay. Izy no teny sy itovizan'ny Ray amin'ny alalany ary Andriamanitra nahary ny zavatra rehetra ho azy. Nirahina avy amin'ny Ray ho toy i Jesoa Kristy, Andriamanitra, nambara tamin'ny nofo hahafahantsika mahazo ny famonjena. Nahazo ny Fanahy Masina izy ary naterak'i Maria Virjiny, izy dia Andriamanitra rehetra sy ny olona rehetra, ary niray saina roa. Izy, Zanak'Andriamanitra sy Tompon'ny zava-drehetra, dia mendrika homem-boninahitra sy ivavahana. Raha ilay mpamonjy voalazan'ny faminaniana, dia maty noho ny fahotantsika izy, natsangana tamin'ny vatana ary niakatra ho any an-danitra, ary miasa ho mpanelanelana eo amin'ny olona sy Andriamanitra izy. Hiverina am-boninahitra izy mba hitondra ny firenena rehetra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny maha mpanjaka mpanjaka. (Jaona 1,1.10.14; Kolosiana 1,15-16; Hebreo 1,3; Jaona 3,16; Titosy 2,13; Matio 1,20; Asa 10,36; 1 Korintiana 15,3-4; Hebreo 1,8; Apokalypsy 19,16)
Jesosy dia teraka tamin'ny fomba mahazatra, nitombo ara-dalàna, noana sy mangetaheta ary reraka, nihinana sy nisotro ary natory. Nijery tsotra, niteny tamin'ny fiteny andavanandro izy, nandeha ara-dalàna. Nanana fahatsapana izy: mangoraka, tezitra, talanjona, alahelo, tahotra (Matio 9,36:7,9; Lioka 11,38: 26,37; Jaona; Matio). Nivavaka tamin'Andriamanitra araka ny tokony hataon'ny olona. Niantso ny tenany ho olombelona izy ary nantsoina ho olombelona. Olombelona izy.
Saingy olona tsy manam-paharoa izy toy izany taorian'ny niakarany, ny sasany kosa nandà tsy ho olombelona (2 Jaona 7). Nihevitra izy ireo fa masina i Jesosy ka tsy afaka mino izy fa misy ifandraisany amin'ny hena, miaraka amin'ny loto, ny hatsembohana, ny fiasan-tsakafo, ny tsy fahatomombanan'ny hena. Angamba izy dia niseho toy ny olombelona iray, ary niseho toy ny olombelona indraindray ny anjely, nefa tsy tonga olombelona akory.
"Ary ny Teny dia tonga nofo ..." (Jaona 1,14). “Niseho” izy, tsy ho hena fotsiny ary tsy nanao “akanjo” afa-tsy ny hena. Lasa hena izy. ‘Tonga tao amin’ny nofo’ i Jesosy Kristy (1 Jaona 4,2). Fantatsika izany, hoy i Johannes, satria nahita azy izahay ary satria nikasika azy izahay (1 Jaona 1,1: 2).
Nilaza i Paoly fa tonga toy ny "olona" i Jesosy (Filipiana 2,7), "atao ambanin'ny lalàna" (Galatiana 4,4), “ny endrik’ ny nofo mpanota ” (Romana 8,3). Ny mpanoratra ny taratasy ho an'ny hebreo dia nanambara fa ilay tonga hanavotra ny olona dia tsy maintsy tonga olombelona faran'izay ilaina: «Satria nofo sy ra ny zaza, nanaiky izany mitovy ... Noho izany, voatery nitovy tamin'ny rahalahiny tamin'ny zavatra rehetra izy » (Hebreo 2,14: 17).
Ny famonjena antsika dia miankina amin'ny hoe tena nisy Jesosy - ary lasa olombelona. Ny andraikiny amin'ny maha mpisolovava antsika, ilay mpisoronabe antsika, dia miankina amin'ny hoe tena nisedra olombelona tokoa izy (Hebreo 4,15). Na dia taorian'ny nitsanganany tamin'ny maty, Jesosy dia nanana nofo sy taolana (Jaona 20,27:24,39; Lioka). Na dia eo amin'ny voninahitra any an-danitra aza dia nijanona ho olombelona izy (1 Timoty 2,5).
"Iza moa izy?" Nanontany ny Fariseo raha nanatri-maso an'i Jesosy izy ireo fa mamela heloka. "Iza no afaka mamela heloka afa-tsy Andriamanitra tokana?" (Lioka 5,21.) Fahotana amin'Andriamanitra ny ota; ahoana no hilazan'ny olona miteny an'Andriamanitra sy ny hanesorana ny fahotanao? Faham-baraka izany, hoy izy ireo. Fantatr'i Jesosy ny eritreritr'izy ireo momba izany ary mbola mamela heloka ihany izy. Izy aza nilaza fa tsy nanota izy (Jaona 8,46). Nanao fanambaràna mahavariana izy:
Nilaza i Jesosy fa hipetraka eo amin'ny tanana ankavanan'Andriamanitra any an-danitra - milaza ny hafa fa nahatsapa ho niteny ratsy ny pretra jiosy (Matio 26,63: 65).
Nambarany fa Zanak'Andriamanitra izy, - izany koa dia fanamavoana izany, satria ao amin'io kolontsaina io dia midika hoe Andriamanitra (Jaona 5,18:19,7;).
I Jesosy dia nilaza fa tena nifanaraka tanteraka tamin'Andriamanitra, hany ka nanao izay tian'Andriamanitra (Jaona 5,19).
Nambarany fa iray amin'ny rainy izy (Jaona 10,30), izay noheverin'ny pretra jiosy koa hoe fanararaotana (Jaona 10,33).
Nambarany fa nanahaka an'Andriamanitra tokoa, ka izay rehetra nahita azy dia nahita ny rainy (Jaona 14,9:1,18;).
Nilaza izy fa afaka nandefa ny Fanahin'Andriamanitra (Jaona 16,7).
Nilaza izy fa mahavita mandefa anjely (Matio 13,41).
übergeben (Jaona 5,22).
Nilaza izy fa mahavita manangana ny maty, anisan'izany ny tenany (Jaona 5,21; 6,40; 10,18).
Nilaza izy fa ny fiainana mandrakizay tsirairay dia miankina amin'ny fifandraisany amin'i Jesosy (Matio 7,22: 23).
Nilaza izy fa tsy ampy ny tenin'i Mosesy (Matio 5,21: 48).
Niresaka ny tenany ho Tompon'ny Sabata Izy - amin'ny lalàna nomen'Andriamanitra! (Matio 12,8.)
Raha olombelona fotsiny izy, dia fampitahorana feno herisetra. Saingy Jesosy dia nanohana ny teniny tamin'ny asa mahagaga. «Minoa ahy fa ao amin'ny ray aho ary ny ray ao amiko; raha tsy izany dia minoa ahy noho ny asa » (Jaona 14,11). Ny fahagagana dia tsy mahavita mampino ny olona, ​​fa izy ireo dia afaka "porofo" mafy.
Mba hanehoana fa nanana fahefana hamela heloka Izy dia nanasitrana marary paraly i Jesosy (Lioka 5, 17-26). Ny fahagagana nataony dia manaporofo fa marina izay nolazainy momba ny tenany. Manana hery mihoatra noho ny olombelona izy satria lehibe noho ny olombelona. Miorina amin'ny fahamarinana ao amin'i Jesosy ny fitakiana momba ny tenany - amin'ny fitenenan-dratsy hafa rehetra. Afaka miteny tahaka an'Andriamanitra izy ary manahaka an'Andriamanitra satria Andriamanitra amin'ny nofo.
Fantatr'i Jesosy mazava tsara ny mombamomba azy. Nanana fifandraisana manokana tamin'ny Ray any an-danitra izy tamin'ny roa ambin'ny folo (Lioka 2,49). Rehefa natao batisa izy dia naheno feo avy any an-danitra nilaza hoe: Zanako malalako ianao (Lioka 3,22). Fantany fa manana iraka hotanterahina izy (Lioka 4,43; 9,22; 13,33; 22,37).
Ho an'ny tenin'i Piera hoe "Ianao no Kristy, ilay Andriamanitra velona Zanaka!" Namaly i Jesoa hoe: «Sambatra ianao, ry Simona zanak 'i Jona; satria nofo sy ra tsy nanambara izany taminao, fa ny Raiko Izay any an-danitra » (Matio 16, 16-17). Jesosy dia zanak'Andriamanitra. Izy no Kristy, ilay Mesia - nohosoran'Andriamanitra tamin'ny iraka manokana.
Nino i Jesosy fa tanteraka taminy ny faminaniana ao amin'ny Testamenta Taloha. Izy ilay mpanompo mijaly izay ho faty hanavotra ny olona amin'ny fahotany (Isaia 53,4: 5-12 sy 26,24; Matio 9,12:22,37; Marka 24:46; Lioka;,). Andrianan'ny fandriam-pahalemana izay tokony nifindra tany Jerosalema izy tamin'ny ampondra (Zakaria 9,9-10; Matio 21,1-9). Zanak'olombelona izay tokony homena hery sy herisetra rehetra (Daniela 7,13: 14-26,64; Matio).
Nilaza i Jesosy fa niaina talohan'ny nahafatesan'i Abrahama ary nilaza izany "faha-tsy fahampiana" tamin'ny fomba mahazatra: "Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: talohan'ny nahatongavan'i Abrahama dia" (Jaona 8,58). Nino indray ny pretra jiosy fa mandany ny zavatra nomen'Andriamanitra i Jesosy ary te hitora-bato azy (V. 59). Ny fehezanteny "Izaho" dia toa ny Eksodosy 2:3,14, izay nanambaran'Andriamanitra an'i Mosesy ny anarany: "Izao no holazainao amin'ny zanak'Israely: [Ny] 'Izaho' dia nandefa ahy ho aminao» (Fandikana Elberfeld). Nalain'i Jesosy ho azy io anarana io.
Nohamafisin’i Jesosy fa "talohan'izao tontolo izao" dia efa nanome voninahitra ny Ray izy (Jaona 17,5). I Johannes dia milaza amintsika fa efa tamin'ny voalohany izy: toy ny teny (Jaona 1,1). Ary ao amin'i Johannes koa dia afaka mamaky ianao fa "ny zavatra rehetra" dia vita amin'ny alàlan'ny teny (Jaona 1,3). Ny ray no mpandrafitra, ny teny namorona, izay nanatanteraka ny nomanina. Natao ary ho azy ny zava-drehetra (Kolosiana 1,16:1; 8,6 Korintiana). Milaza ny Hebreo 1,2 fa Andriamanitra no "nanao izao tontolo izao" tamin'ny alàlan'ny Zanaka.
Ao amin'ny Hebreo, toy ny ao amin'ny Kolosiana, dia milaza fa ny "zanakalahy" dia mitondra "izao rehetra izao fa" misy "ao aminy (Hebreo 1,3; Kolosiana 1,17). Samy milaza amintsika fa izy no "endrik'andriamanitra tsy hita" (Kolosiana 1,15), «ny endrik 'ny maha-izy azy» (Hebreo 1,3).
Iza Jesosy Izy dia andriamanitra tonga nofo. Izy no mpamorona ny zava-drehetra, andrian'ny fiainana (Asan’ny Apostoly 3,15). Toa an'Andriamanitra ihany izy, manana voninahitra toa an'Andriamanitra, manana hery toa an'Andriamanitra irery. Tsy nahagaga raha tonga saina ny mpianatra fa Andriamanitra dia Andriamanitra.
Ny fiheverana an'i Jesosy dia nitranga tamin'ny fomba tsy hita maso (Matio 1,20; Lioka 1,35). Niaina tsy nanota Izy (Hebreo 4,15). Tsy lavorary izy, ary tsy misy lesoka (Hebreo 7,26:9,14;). Tsy nanota izy (1 Pt 2,22); tsy nisy ota tao aminy (1 Jaona 3,5); tsy nanota izy (2 Korintiana 5,21). Na manao ahoana na manao ahoana na manao ahoana ny fakam-panahy, dia naniry mafy ny hankatò an'Andriamanitra foana i Jesosy. Ny tanjony dia ny hanao ny sitrapon'Andriamanitra (Hebreo 10,7).
Nivavaka tamin'i Jesosy imbetsaka ny olona (Matio 14,33; 28,9 sy 17; Jaona 9,38). Tsy azo ivavahana ny anjely (Apokalypsy 19,10), saingy navelan'i Jesosy. Eny, manompo ny Zanak'Andriamanitra koa ny anjely (Hebreo 1,6). Ny vavaka sasany dia niresaka mivantana tamin'i Jesosy (Asan’ny Apostoly 7,59-60; 2 Korintiana 12,8; Apokalypsy 22,20).
Ny Testamenta Vaovao dia miresaka fiderana lehibe kokoa ho an'i Jesosy Kristy, miaraka amin'ny pôlitika izay natokana ho an'Andriamanitra: «Voninahitra ho azy mandrakizay mandrakizay! Amena » (2 Timoty 4,18;
2. Petera 3,18:1,6; Apokalypsy). Izy no manana ny anaram-boninahitra mpitondra avo indrindra azo omena (Efesiana 1,20: 21). Raha miantso azy hoe Andriamanitra isika, dia tsy dia be loatra izany.
Ao amin'ny Apokalipsy Andriamanitra sy ny Zanak'ondry dia deraina mitovy, izay maneho ny fitoviana: "Izay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana sy ny Zanak'ondry dia dera sy laza ary fiderana ary herisetra hatramin'ny mandrakizay hatramin'ny mandrakizay!" (Apokalypsy 5,13). Ny zanakalahy dia tokony hajaina toy ny ray (Jaona 5,23). Andriamanitra sy Jesosy dia antsoina hoe Alfa sy Omega, fiandohana sy fiafaran'ny zava-drehetra (Apokalypsy 1,8 & 17; 21,6; 22,13).
afatory daholo ny lohalika rehetra izay any an-danitra sy ety an-tany ary ambanin'ny tany, ary ny lela rehetra hiteny fa i Jesoa Kristy no Tompo, ho voninahitr'Andriamanitra Ray » (Filipiana 2,9-11, teny nalaina avy amin'ny Isaia 45,23). I Jesosy dia omena voninahitra sy manaja, araka ny voalazan'i Isaia, dia tokony homen'Andriamanitra.
Nilaza i Isaia fa iray ihany ny Mpamonjy - Andriamanitra (Isaia 43:11; 45,21). Nilaza mazava i Paoly fa Mpamonjy Andriamanitra, fa Jesosy koa no mpamonjy (Tit1,3; 2,10 sy 13). Ankehitriny ve dia misy Mpamonjy na roa? Ny Kristiana tany am-boalohany dia nanatsoaka fa Andriamanitra ny Ray ary Jesosy dia Andriamanitra, saingy iray ihany ny Andriamanitra ary noho izany misy Mpamonjy iray ihany. Ny ray sy ny zanany lahy iray (Andriamanitra) fa olona hafa.
Andalan-teny maro hafa ao amin'ny Testamenta Vaovao no miantso an'i Jesosy Andriamanitra. Jaona 1,1: "Andriamanitra no Teny." Andininy 18: «Tsy mbola nisy nahita an'Andriamanitra na oviana na oviana; Ilay teratany, izay Andriamanitra sady ao an-dohan-drainy, no nanambara izany tamintsika. » Jesosy dia ilay Andriamanitra izay mampahafantatra antsika ny Ray. Taorian'ny fitsanganan'ny maty dia nahafantatra an'i Jesosy ho Andriamanitra i Tomasy: "dia namaly Tomasy ka nanao taminy hoe: Tompoko sy Andriamanitro!" (Jaona 20,28).
Nilaza i Paoly fa lehibe ny razana noho izy ireo, "Kristy dia tonga araka ny nofo izay Andriamanitra ambonin'izy rehetra, derao mandrakizay. Amena » (Romana 9,5). Ao amin'ny taratasy ho an'ny Hebreo, Andriamanitra mihitsy no miantso ny zanakalahy "Andriamanitra": "Andriamanitra ô, maharitra mandrakizay ny seza fiandriananao ..." (Hebreo 1,8).
"Fa ao aminy [Kristy]," hoy i Paoly, "ny fahafenoan'Andriamanitra rehetra no mitoetra ao anatiny" (Kolosiana 2,9). Andriamanitra rehetra i Jesosy Kristy ary mbola manana "vatana" ankehitriny. Izy no tena mitovy amin'Andriamanitra - Andriamanitra tonga nofo. Raha olombelona olombelona i Jesosy dia tsy mety ny mametraka ny fitokisantsika aminy. Saingy satria masina izy, dia mila matoky azy isika. Matoky tanteraka izy satria Andriamanitra.
Ho antsika dia zava-dehibe ny maha-Andriamanitra an'i Jesosy, satria raha tsy manam-paniriana izy dia afaka manambara amin'Andriamanitra amintsika marina (Jaona 1,18:14,9;). Andriamanitra iray ihany no afaka mamela antsika ny fahotantsika, manavotra antsika, mampihavana ny tenantsika amin'Andriamanitra. Andriamanitra iray ihany no mety ho tonga tanjon'ny finoantsika, dia ny Tompo, izay itokiantsika tsy manam-petra, dia ny Mpamonjy, izay ivavahantsika amin'ny hira sy ny vavaka.
Ny Konsilin'i Nicaea (AD 325) dia nametraka ny maha-Andriamanitra an'i Jesosy, Zanak'Andriamanitra, ary ny mombamomba azy amin'ny Ray (Nikasa Krizy). Ny filan-kevitr'i Chalcedon (451 AD) dia nanampy fa olombelona koa izy:
"[Noho izany, manaraka ny razana masina, isika rehetra dia miara-mampianatra fa i Jesoa Kristy Tompontsika dia zanaky ny fanekena ihany; mitovy ny toe-panahy sy ny maha-izy azy, ny tena Andriamanitra iray sy ny tena olombelona ... Alohan'ny fotoana nahaterahan'ny Ray araka an'Andriamanitra: avy amin'i Maria, Virjiny sy Renin'Andriamaahangy. (theotokos) [teraka], iray izy ary iray ihany, Kristy, Zanaka, Zanany, tsy mifangaro ao anaty natiora roa ... Ny fahasamihafana misy eo amin'ny natiora dia tsy azo esorina mihitsy noho ny firaisana; fa kosa, ny maha-toetra mampiavaka ny toetrany roa dia voatahiry ary mifandray amin'ny olona iray ... »
Asehony antsika koa fa mahavita azy Andriamanitra. Izy dia afaka ny ho tonga ampahany amin'ny famoronana azy. Izy dia afaka manamboatra ny elanelana misy eo amin'ny tsy noforonina sy ny noforonina, eo anelanelan'ny masina sy ny mpanota. Mihevitra angamba isika fa tsy azo atao izany; mahay an'Andriamanitra. Nasehon'i Jesosy antsika koa hoe inona ny maha-olombelona ao anatin'ny fahariana vaovao. Raha miverina izy ary atsangana, dia ho hitantsika toa azy (1 Jaona 3,2). Hanana vatana iray isika, toy ny vatany namindra (1 Korintiana 15,42: 49).